Bento4~ The ICT.com.mm Blog
ယခင်တစ်ပတ်က ဖော်ပြခဲ့သည့် Filemaker ၏ OS X အတွက် personal database အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားတာကတော့ Bento ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် Bento ဟာ Mac OS X အသုံးပြုသူများ မိမိ၏ လုပ်ငန်းကို စုစုစည်းစည်းဖြစ်နေချင်သူများအဖို့ အကောင်းဆုံး application တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပြီး ၄င်းတွင် ပါဝင်သော Custom Labels၊ lock forms၊ location-based features နှင့် ပိုမိုကောင်း မွန်သော database sharing တို့ကလည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် အားရစရာအချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Bento နှင့် စတင်ခြင်း
တစ်ကယ်တော့ Bento ဆိုတာဟာ မိမိရဲ့ information များကို အဆင့်ဆင့် စနစ်ကျစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်သော software တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မိမိ data base အတွင်း မတူညီသော field များ (နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အချိန် အစရှိသဖြင့်) ကို စုစည်းကာ record ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ Library များကိုလည်း Smart Collection များ (ကဏ္႑အလိုက် record များကို group ဖွဲ့ထားနိုင် ခြင်း) အဖြစ် sub divide ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် folder များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ libraries များအလိုက် Group ဖွဲ့ထားနိုင်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သို့သော်လည်း Bento အတွင်း Template များပါဝင်တဲ့အတွက် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းများကို အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ စိတ်ပူစရာမလိုပဲ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ recipe များနှင့် member များကိုသာ စနစ်တကျ ပြုစုထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ Bento အတွင်း အသုံးပြုရမယ့် Technical ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို စိတ်ပူစရာမလိုမယ့် အနေအထားပါပဲ။ Bento4ဟာ စစချင်းမှာတော့ သင့်ကို Tutorial Video များနဲ့ ကြိုဆိုနေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း သင့်အနေနဲ့ database software တစ်ခုကို အသုံးပြုရတာ ကြောက်ရွ့ံခြင်းမရှိဘူး ဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Bento4ကို သာမန် အသုံးပြုသူတွေတောင် database software တစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပဲ၊ အချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ software အကောင်းစားတစ်ခု အဖြစ်သာ ထင်မြင်လေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်အချက်ကတော့ Bento4ဟာ Apple ရဲ့ Address Book၊ iCal၊ iPhoto နှင့် Mail တို့နှင့် တွဲဖက်ကာ အလုပ်လုပ် ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ Bento4ကို စလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အဆိုပါ Feature များကို ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် i Tune ပုံစံ panel ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် အဆိုပါ feature များမှ အချက်အလက်များကို မိမိရဲ့ information ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ကာ တွဲဖက်အလုပ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင်တော့ iCal ထဲမှ Event Library ကို contact form ရှိ လူတစ်ဦးချင်းဆီအလိုက် ပတ်သက်ရာ upcoming events များနှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုသွားနိုင်ခြင်းပါပဲ။ ထို့ပြင် ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုရခြင်းကလည်း user-friendly ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Bento4အတွင်းမှာ လွန်စွာအသုံးဝင်တဲ့ Template များဖြစ်တဲ့ Vacation Planner၊ Health Record၊ Job Search၊ My House Search၊ Wine Collection၊ Party Planner နှင့် Meeting Notes အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် အသုံးပြုသူများဟာ အွန်လိုင်းအတွင်း အခြားအသုံးပြုသူများ ဖန်တီးထားသော Template များကို Template Exchange မှ တဆင့် ရယူနိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်အနေနဲ့ Template တစ်ခုမှနေ၍ Library တစ်ခုကို ဖန်တီးမယ် ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင်ရှိသော အပေါင်းလက္ခဏာ ရှိသော sign ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ File ထဲမှ New File from Template ကိုရွေးချယ်၍သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် available thumbnail များပါဝင်သည့် window တစ်ခုကျလာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုထဲတွင်မှ သင်ဟာ Education၊ Personal နှင့် Work အစရှိသည့် ကဏ္႑များကို ရွေးချယ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ ရှိနှင့်ပြီးသား Template များမှ မစတင်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ Blank Field ထဲသို့ မိမိစိတ်ကြိုက် field များထည့်သွင်း ခြင်းဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ field တစ်ခုကို create လုပ်ရာတွင်လည်း Bento4ဟာ သင့်ကို Text၊ Number၊ Choice၊ Checkbox၊ Media၊ File List၊ Message List၊ Simple List တို့မှ တဆင့် ရွေးချယ်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Bento3တွင် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော Simple List feature ကတော့ ယခုအချိန်မှာ spreadsheet လို function မျိုး ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပြီး ၄င်းမှတဆင့် လုပ်ငန်းအတွင်း အလွန်အသုံးဝင်သည့် တွက်ချက်မှုများ (Calculation) များကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Filed များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးချိန်မှာတော့ ၄င်းတို့ကို form view ထဲသို့ drag ဆွဲထည့်ကာ မိမိလိုသလို စီထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ grid element တွေရဲ့ size ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး title များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ထူးခြားချက်ကတော့ အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ split screen ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အဆိုပါ split screen မှ နေ၍ Record များကို သီးခြား ဖော်ပြပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ကာ Table များကိုလည်း သီးခြား မြင်တွေ့သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bento4မှာ နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့သွားနိုင်မယ့် feature ကတော့ form များကို lock လုပ်သွားနိုင်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် form များကို မှားယွင်းစွာ ဖျက်မိခြင်းရန်မှ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေမည် ဖြစ်ပြီး lock/unlock ကိုလည်း record ၏ အောက်ညာဖက်ထောင့်မှ lock ပုံစံကိုနှိပ်၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Bento4ရဲ့ နောက်ထပ် Feature သစ်တွေကို လေ့လာရကြည့်ကြပါမယ်။
ယခုအချိန်တွင် သင့်အနေဖြင့် invoice များ၊ sales order များနှင့် အခြား form များကို print ထုတ်သွားနိုင်မည့် print option များ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
. form များကို print ထုတ်ပါက page margin များ သတ်မှတ် ထားနိုင်ခြင်း
. field border များ မပါပဲ form များကို print ထုတ်နိုင်ခြင်း
. print ထုတ်ရာတွင် သေသပ်လှပမည့် themes များ ပါဝင်လာခြင်း
Export Templates with Data
ယခုအချိန်တွင် သင့်ရဲ့ data များကို bento template များနှင့်တကွ export ပြုလုပ်နိုင်ပြီး pre-populated database များကိုလည်း အခြား bento အသုံးပြုသူများနှင့် Share ပြုလုပ်သွား နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Easy Date Searching
အသစ်ပါဝင်လာသော date searching ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချိန်ကို အလိုအလျောက်သိစေနိုင်မည့် information များအတွက် Smart Collection ကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတာ့ Bento4အတွင်း အသစ်ထပ်မံပါဝင်လာတဲ့ Feature များဖြစ်ပါတယ်။ အချုပ်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Bento4ဟာ အခြား ရှုပ်ထွေးသော database software များလို ခက်ခက် ခဲခဲ စဉ်းစားစရာမလိုပဲ သာမန် အသုံးပြုသူတွေ ၄င်းတို့ရဲ့ အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ စနစ်တကျ စုစည်းနိုင်မယ့် database application တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ Bento ဟာ Mac အတွက် cosumer-end database software တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး software တစ်ခုလို့သာဆိုပါရစေ။
iCal၊ Contacts နှင့် iPhoto တို့ တွဲဖက်ပါဝင်ပြီး database ကိုလည်း share သွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် အသုံးဝင်လှသော template များကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး အားသာချက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခြားသူများ၏ template များကို ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်တာကလည်း စိတ်ကျေနပ် စရာပါ။
Cloud ဝန်ဆောင်မှုမရှိခြင်းနှင့် Windows အတွက် မထုတ်လုပ်ထားခြင်းတို့က အဓိကအားနည်းချက်ပါပဲ။
အသုံးဝင်သော Template များ ပါဝင်ခြင်း၊ local network အတွင်း database sharing ကို inroads towards ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် Security Option အသစ်ပါဝင်လာခြင်းတို့ကြောင့် Bento4ဟာ မရှိမဖြစ် သုံးစွဲသင့်တဲ့ personal database ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
AppleOSes, Bento 4
Older Up to Date